ပင်မစာမျက်နှာ - ယခုသတင်းပို့ပါ
ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောအပြုအမူသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိကုမ္ပဏီများကိုနှစ်စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ။ ကုန်ကျသည်။ လွတ်လပ်သော hotline စက်ရုံရှိအဖွဲ့အစည်းများသည်လိမ်လည်မှုဆုံးရှုံးမှုများကိုထက်ဝက်လျှော့ချခဲ့သည်။
IN-HOUSE ကိုထောက်ပံ့ပါ ပညာရေး & ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
BESPOKE & မတူညီသောကိစ္စရပ်စီမံခြင်းစနစ် - ပုံပြင်®
၂၄ ရက်တစ်ရက်၊ ခုနစ်ရက်သီတင်းပတ်ဖြစ်သည်
လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး HOTLINE လျှို့ဝှက်ထားသည်
Report It Now ™သည်သင်၏လုပ်ငန်းကိုမရိုးသားမှုနှင့်အပြုအမူအမှားများကင်းသောအလုပ်ခွင်တွင်မြှင့်တင်ရန်သင်၏ကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
Report It Now ™သည်အလုပ်ခွင်ရိုးသားမှုနှင့်သမာဓိရှိမှုယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးရန်သင်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ သုတေသနပြုချက်များအရ လွတ်လပ်၍ လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းမှုဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာ hotline သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်အခြေပြုစနစ်ရှိခြင်းသည်လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းကဲ့သို့သောကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောအပြုအမူများမှအန္တရာယ်ကိုအောင်မြင်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေအတွက်ကျင့်ဝတ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရရှိအောင်ကူညီဖို့ငါတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာ hotline ကိုပညာရေး၊ ပံ့ပိုးမှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ကအမည်မသိ၊ လုံခြုံမှုနဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတော်မတရားပြုမူတာကိုသတင်းပို့ဖို့သူတို့ကိုအားပေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ View ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ.
လုပ်ငန်းခွင်လိမ်လည်မှုခဲ့ကြသည် တစ် ဦး အစွန်အဖျားများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ၀ င်ငွေသည်နှစ်စဉ်လိမ်လည်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်
EthicsPro® - လုံခြုံပြီးအမည်မသိ၊
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် EthicsPro အတွက်အသစ်လား။ သင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များရှာဖွေလိုပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်များကိုရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်တွင်နှိပ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဤသူသည်သင်မသေချာလျှင်၊ စကားဝှက်အခက်အခဲများရှိပါကသို့မဟုတ်ဤစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်လိုအပ်သည်ဟုထင်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
သတင်းပို့ပါယခုသတင်းထုတ်ပြန်နေသည့် hotline သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားလွတ်လပ်မှုမရှိသည့်စနစ်တစ်ခုကိုသူတို့ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောအပြုအမူများကိုအစီရင်ခံတင်ပြနိုင်စေသည်။ လိမ်လည်လှည့်စားမှုဖြစ်နိုင်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုချပြီးငါတို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင်ထံသို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်နည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါနံပါတ်ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းဆက်ပါ။
Hamilton က 3240
မူပိုင်ခွင့်© 2021 · လော့ဂ်အင်